Wararka - Soo bandhigida ZKONG Master Masterkiisii ​​ugu dambeeyay
Qofna ma sii saadaalinin xoojinta dhibaatada COVID-19, laakiin shirkadaha moodooyinka qaarkood waxay ogaadeen inay ka qalab fiican yihiin kuwa kale-badanaa sababta oo ah aqoontooda dijitaalka ah.
Caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha iyo macaamiisha had iyo jeer waa mudnaanta buuxda. Waqtigaan la joogo, shirkadaha moodada ayaa xiray dukaamo, waa waqti aan horay loo arag in la soo bandhigo lana sameeyo aalado dhijitaal ah sida fashiontag oo ah ka shaqeynta fog iyo iskaashiga bakhaarada, xarumaha qeybinta iyo dukaamada jirka.
Guud ahaan, calaamadda elektarooniga ah / fashiontag waxay awood u leedahay inay taageero u fidiso shirkadaha moodada afar qodob oo muhiim ah: muujinta qiimaha firfircoon, adeegga macaamiisha oo dheeri ah, waayo-aragnimada omnichannel, hagaajinta nidaamka.
Daraasado badan oo kiis ah oo loogu talagalay ESL / fashiontag ee ZKONG waxay diiradda saareen xiriirka macaamiisha iyo khibrada.
Jiilka casriga ah ee ugu dambeeyay ee ZKONG, warqad elektaroonik ah iyo 5 sano helitaanka nolosha batteriga, iyo sidoo kale qiimaha iyo wax soo saarka ay maamusho ZKONG Cloud System meelkasta waqti kasta.
Qiimaha ZKONG fashiontag ee moodada:
Isku dubbaridi macluumaadka khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ee khibradda omnichannel
Majiro shaqooyin gacanta iyo qaali ah oo lagu badalayo sumadaha warqadaha, shaqaalahana waqti badan ayaa loo ilaaliyaa iibka
Ku hagaaji qiimaha dallacaadaha xilliyeed / cimilada la xiriira si fudud
Loogu talagalay ololeyaal badan
Shayga ayaa sidoo kale bixiya maareynta saamiyada, iyo astaamaha ka-hortagga xatooyada
Suurtagalnimada in iskaanka QR-codes la dalbado sheyga ku yaal websaydhka
Naqshad la qaabeeyey oo ku habboon qaabkaaga astaanta ah